Kufuphi neBaikal !!!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguАлександр
Eli ligumbi elinamagumbi amathathu kwindlu etofotofo kumgama oziimitha ezingama-70 ukusuka kunxweme lweChibi iBaikal, ukusuka kwiifestile apho kukho umbono omhle weentaba ezikunxweme olungaphesheya. Kufuphi - iMyuziyam yeBaikal eyaziwayo yehlabathi, ipaki ye-dendrological, i-embankment.
KUFUTSHANE neBaikal! Hamba elunxwemeni kusasa, emva kwemini nangokuhlwa ngaphandle kobunzima !!!!!!!!!!!
Kwimeko yokubhukisha ngaphezulu kweentsuku ezi-5 - ukudluliselwa simahla kwi-Irkutsk nasemva!
Indlu eshushu kakhulu ebusika! Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka kufutshane nendlu. I-Wi-Fi elungileyo kunye neTV yesathelayithi (isiNgesi, isiTshayina, amajelo aseJapan ayafumaneka). Ifulethi linethala leencwadi elincinci (iiklasikhi zoncwadi lwesiRashiya, amabali acuphi, iqoqo lemifanekiso edumileyo).
1 ibhedi elala abantu ababini, isofa ekwayibhedi eyi-1, 1 iisofa eziyi-
4.96 ·Izimvo eziyi-164
4.96 · Izimvo eziyi-164
Kukho i-minimarket ecaleni kwendlu kwisakhiwo esingummelwane (evulekileyo imihla ngemihla ukusuka kwi-10-00 ukuya kwi-21-00). Phezulu, 0.8 km kude, kukho i-Eastland ski resort (20-25 imizuzu yokuhamba).
Ngesivumelwano sethu, ndinethuba lokuqhuba uhambo ngemoto ngaphandle kweentsuku ezi-2 ukuya kwintlambo yaseTunkinskaya yaseBuryatia (Arshan), ukuya kulwandle oluncinci lwaseBaikal (isiqithi saseOlkhon), iSobolinaya Gora ski resort esixekweni. of Baikalsk, ngeenxa zonke emzini Irkutsk (inani iindawo emotweni - 4 umntu, ixabiso ixhomekeke kwinani iindwendwe). Ndiqinisekisa okulungileyo, inkxaso yokuhamba ekhululekile kunye nemibono ephezulu!
Kwakhona ndikhenketha ngeenyawo ukuya kwizibuko laseBaikal ngendlela endingenakuyilibala ukutyelela itempile ekwiinduli zeBaikal.
Umbuki zindwendwe ngu- Александр
Unxibelelwano lwasekhaya kunye ne-intanethi zisesandleni sakho.